Tag: GitHub | Martech Zone
Databox: Waxqabadka Raad-raac iyo Baro Aragtida Waqtiga Dhabta ah
Jimcaha, Agoosto 10, 2018 Friday, May 21, 2021 Douglas Karr
Databox waa xalka dashboard-ka kaas oo aad ka dooran karto daraasiin isku dhafan horay loo dhisay ama aad u isticmaali karto API iyo SDKs si aad si fudud uga soo ururiso xogta dhammaan ilaha xogtaada. Nakhshadeeyehooda 'Databox Designer' uma baahna wax codeyn ah, oo jiita iyo dhibic leh, u habeyn, iyo isku xirnaanta ilaha xogta ee fudud. Tilmaamaha Databox ee ay ku jiraan: Digniinta - Udir digniino horumarka laga gaadhayo cabbiraadaha muhiimka ah adoo riixaya, emayl, ama Slack. Mawduucyada - Databox horeyba waxay u leeyihiin boqolaal shey oo diyaarsan
Chartio: Baadhitaanka Xogta ku saleysan Daruuraha, Jaantusyada iyo Dashboorrada Is-dhexgalka
Axad, Disembar 3, 2017 Axad, Disembar 3, 2017 Douglas Karr
Wax yar solutiosn ayaa leh awooda isku xirnaanta wax walba, laakiin Chartio waxay qabaneysaa shaqo weyn oo leh interface interface taas oo fudud in lagu boodo. Ganacsiyadu way isku xidhi karaan, sahamin karaan, beddeli karaan, oo ka arki karaan wax uun ilaha xogta ah. Iyada oo ilo badan oo xog kala durugsan iyo ololeyaal suuqgeyn ah, way ku adag tahay suuqleydu in ay aragti buuxda ka helaan meertada nolosha macmiilka, sheegashada iyo saameynta guud ee ay ku leeyihiin dakhliga. Chartio Adoo ku xiraya dhammaan
Korodh: Dhis Khariidadda Suuqgeynta Internetka ee Ugu Dambeysa
Jimco, Nofeembar 27, 2015 Sabtida, Janaayo 14, 2017 Douglas Karr
Waxaan nahay taageerayaal waaweyn oo muujinaya tilmaamayaasha waxqabadka muuqaalka. Waqtigan xaadirka ah, waxaan u shaqeynaa warbixinnada billaha ah ee fulinta macaamiisheenna, xafiiskeenna gudahiisa, waxaan leenahay shaashad ballaaran oo muujineysa dashboard-waqtiga dhabta ah ee dhammaan tilmaamayaasha waxqabadka suuqgeynta internetka ee macaamiisheena. Waxay ahayd aalad aad u wanaagsan - markasta na ogeysiinaysa macaamiisha ay helayaan natiijooyin sare iyo kuwa fursad u leh horumar. In kasta oo aan hadda isticmaalno Geckoboard, waxaa jira dhowr xaddidaadyo aan nahay
Sida loo Xaqiijiyo Naqshadeynta Emailka Jawaabta leh iyo Xagee Caawimo laga Helaa!
Jimco, Janaayo 9, 2015 Khamiista, Oktoobar 29, 2020 Douglas Karr
Waa wax laga naxo laakiin dad badan ayaa adeegsada taleefannadooda casriga ah si ay u akhriyaan emaylka marka loo eego inay si dhab ah u wicitaannada taleefanka u diraan (ku dheji ereyga ku saabsan isku xirnaanta halkan). Iibsashada moodellada taleefannada duugga ahi waxay hoos udhaceen 17% sanadba sanadka ka dambeeya iyo 180% dad badan oo ganacsato ah ayaa adeegsanaya taleefannadooda casriga si ay u eegaan, u shaandheeyaan, una akhriyaan emayl ka badan sidii ay sameeyeen dhowr sano ka hor. Dhibaatadu, in kastoo, ay tahay in codsiyada emaylku aysan horay u marin sida ugu dhakhsaha badan ee daalacashada bogagga internetku leeyihiin. Wali waan ku dhegannahay
Tirooyinka: Kumbuyuutarka Qalabka Isku-dhafan ee Isku-dhafan ee iOS
Sabtida, Oktoobar 25, 2014 Sabtida, Janaayo 14, 2017 Douglas Karr
Numberics wuxuu u oggol yahay dadka isticmaala iPhone iyo iPad inay abuuraan oo ay u habeeyaan dashboodkooda isku dhafan ee ka yimaada ururinta sii kordheysa ee dhinacyada saddexaad. Ka soo qaado boqolaal wijado horay loo sii qorsheeyay ah si aad u dhisto aragti guud ee gorfaynta bogga, ka-qaybgalka warbaahinta bulshada, horumarka mashruuca, funaanadaha iibka, safafka taageerada macaamiisha, dheelitirka xisaabta ama xitaa lambarrada ka soo baxa xaashiyahaaga daruuraha. Astaamaha waxaa ka mid ah: Qalabka la-qorsheeyey ee noocyo kala duwan ah oo ay ku jiraan lambarrada dhaadheer, garaafyada xariiqda, jaantusyada loo yaqaan 'pie charts', liisaska masaafada, iyo in badan Abuur badan